Aluminium Industrial telescopic site nzọụkwụ kwụ ọtọ ịkọwapụta ọkwa steepụ mpịachi steepụ
Site na ngwongwo aluminom siri ike, ubube a nwere ike ịgbakwunye ụlọ ọ bụla. Enwere ike iji ya dị ka ọkwa telescopic, okpukpu abụọ, steepụ steepụ na ntọala ntọala abụọ. N'ihi ihe ezi uche dị na ya, ozugbo a rụchara ubube ahụ, ihe mgbakwasị ahụ ga na-akpaghị aka ịgbachi n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, nke na-eme ka ubube dị mfe iji.
Sunnydaze Rolling Ogige Ugbo ala nke nwere ike ijikwa oche ụgbọ ala, oche swivel, nkata na tray.
Ná ngwụsị izu anyị niile na-enwe mmasị ịrụzi ogige nke aka anyị. Ma mgbe ị na-edozi ahịhịa ahụ, ike agaghị agwụ gị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ squat na ọrụ? Cartgbọ ala ogige Achọrọ m ịme ka ị mata n'okpuru nwere ike idozi nsogbu nke ọrụ squatting maka gị ma mee ka ị nwekwuo ahụ iru ala na ọrụ.
ABCTOOLS Durable Nchekwa Utility Fkpakọ Beach Wagon
Agongbọ igwe eji arụ ọrụ na-eji igwe rụọ, 600D oxford fabric na PVC ma ọ bụ wiil PU. Ngụkọta ya dị nha bụ 104 × 53 × 117cm, nke apịaji bụ 53 × 13 × 67cm. Ọ bụ ngwa maka ịzụ ahịa, ịma ụlọikwuu, igwu mmiri.
3 Tiers Nchekwa Mobile Cart 4 Wheels Racking Maka Ezinaụlọ
C1714S3 bụ ụgbọ ala mkpanaka nke 3, nha ya bụ (L * D * H) bụ 43 * 36 * 88cm, nke igwe nwere galvanized dị elu, na-eji teknụzụ na-agba ọkụ, ihe dị ka 0.4-0.7mm, nha tube bụ 22 * ​​0.7mm na 22 * ​​0.5mm.
Aluminom foldable n'elu ikpo okwu aka ụgbọala na telescoping ahụ na ikpo okwu HT153
HT153 bụ aluminom foldable n'elu ikpo okwu aka ụgbọala na telescoping ahụ na ikpo okwu, The n'ozuzu size (H × W × D) bụ 34 "× 16-1 / 2" × 28 ", na apịaji size bụ 9" × 16-1 / 2 ”× 21”, ụgbụ ya bụ 14.5 lbs.HT153 na LV150 bụcha ngwongwo ikpo okwu, kedụ ihe dị iche na ha?
China emeputa oké ọrụ ígwè 2 wiil P- aka n'aka trolley gwongworo
HT1805 bụ ígwè P-aka aka ụgbọala, The n'ozuzu size (H × W × D) bụ 52 "× 21-1 / 2" × 18 ", na mkpịsị ụkwụ efere size (W × D) bụ 14" × 9 " , ikike ibu ya bụ 600lbs., ụgbụ dị arọ bụ 22lbs. Ejiri 10 "× 3-1 / 2" wiilị ọkụ.
Zụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọnụahịa nchara nchara azụ aka aka maka ụlọ nkwakọba ihe / ebe ịgba ama / njem / ụlọ na-akpụ akpụ
HT1561 bụ nchara nchara azụ azụ aka ụgbọala, mkpokọta nha (H × W × D) bụ 39-1 / 2 "× 18" × 14 ", na mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ (W × D) bụ 14" × 7 " , ikike ibu ya bụ 300lbs., ụgbụ dị arọ bụ 14lbs. Onu ogugu na roba 8 ”× 1-3 / 4.
600lbs. Aluminom D-aka Aka ụgbọala na Pneumatic Wheels
HT1862 bụ aluminom D-njikwa aka ụgbọala. Mkpokọta size (H × W × D) bụ 52 ”× 20-1 / 2” × 18-1 / 2 ”, na mkpịsị ụkwụ efere size (W × D) bụ 18” × 7-1 / 2 ”, ya net arọ bụ 20lbs. Na agbanyeghị na ọ dị fechaa, ọ naghị emetụta ikike iburu ya ma ọlị. Ikike ibu ya dị 600 pound, ọ bụkwa ezigbo onye inyeaka maka ebu.
Shelf maka ulo Ime ụlọ ime ụlọ Ogbe shelf Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Obere Nchekwa Obere